ILoft. - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguDavid
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uDavid iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yedolophu ye-granite eneminyaka eyi-121, emi embindini wedolophu ekufikeleleka kuyo ngokulula kuzo zonke izinto eziluncedo. 5min ukuhamba ukuya kwisikhululo sikaloliwe ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseDyce, eAberdeen okanye e-Inverness. Zonke iivenkile zisemnyango wakho, ukuqubha kwalapha kusemva kwepropathi, ipaki yetrampoline, i-10 pin bowling, ii-pubs kunye neendawo zokutyela zonke zikumgama nje omfutshane.
Kwakhona ibekwe ngokugqibeleleyo kuye nabani na ofuna ukuhlola Cairngorms National Park, imbali Aberdeenshire Castles umkhondo kunye nezangqa zamatye zendawo.
Ipropathi yeLoft enamagumbi okulala ama-3 abanzi (amagumbi ama-2 eendwendwe) ngaphezulu kwemigangatho emibini ephezulu yepropathi icoceke kakhulu kwaye ihonjiswe kakuhle kwaye ikhohlisayo ngobukhulu ukusuka ngaphandle.
Ngenxa yendawo ekwisitrato esiphakamileyo sase-Inveurie ndineglasi ephindwe kathathu phambi kwepropathi kunye neglasi ephindwe kabini kwenye indawo.
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elinesitovu segesi, i-oveni encediswa yifeni yombane, i-microwave, ifriji yefriji, umatshini wokuhlamba onentsimbi kunye nebhodi yoku-ayina egcinwe ecaleni kwefriji.
Igumbi lokuhlambela ayisiyiyo eyona ndawo inkulu kodwa usenayo ibhafu eneshawa yokuma, isinki, isipili kunye nethawula eshushu.
I-Inverurie, idolophu ephumelelayo yase-Aberdeenshire emi kwintlambo yoMlambo iDon, sisiseko esihle sokukhenketha iinqaba zale ndawo.
Yasekwa nguDavid waseHuntingdon, u-Earl waseGarioch kunye noyise-mkhulu kaRobert the Bruce, eyaziwa ngokuba yiNkunzi yeGarioch.
Amabhodlo eCawa yamandulo yaseKinkell anokufunyanwa emazantsi edolophu kunye neekhilomitha ezintlanu ukuya entshona yindawo ekunokwenzeka ukuba iMons Grampius apho amaRoma oyisa iiPicts ngo-84 AD-idabi lokuqala elakhe laliwa kwi-oyile yaseScotland. Kwi-Easter Aquhorthies, iimayile ezimbini ngasentshona ye-Inverurie, iindwendwe ziyakwazi ukuncoma isangqa samatye esigqwesileyo, kunye nelitye elimangalisayo lePictish, iLitye leBrandesbutt, lingatyelelwa kufutshane nomda osemantla wedolophu.
IThainstone Mart, esemazantsi edolophu, yenye yezona zinto zithengisa kakhulu imfuyo eYurophu.
Kweli nqanaba andirenti ipropathi yonke ke ngoko kufuneka ndihlale kwigumbi eliphezulu kwindawo ephezulu kwaye ndiya kuhlala ndizama ukubakho ukunika uncedo kunye neengcebiso kwiindwendwe.